Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada The Intercept oo Maraykanka Ku’eedaysan Caawinta Sirdoonka Itoobiya.
Hay’ada The Intercept oo Maraykanka Ku’eedaysan Caawinta Sirdoonka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ September 15, 2017
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in hay’ada sirdoonka Maraykanku ay ciidamada sirdoonka wayaanaha kacaawiso howlo badan oo kusaabsan dhinaca sirdoonka.
Sida xogta aan kuhelayno hay’ada sirdoonka Maraykanka ayaa ciidanka sirta ee wayaanaha kacaawisa dhagaysiga telefoonada dadka kasoo horjeeda xukuumada wayaanaha iyo waliba akhrinta Email lada siyaasiyiinta, waxaana lasheegayaa in sirdoonka wayaanuhu ay dabagal kusameeyaan teleefoono badan oo dadka taliska wayaanaha mucaaradka ku ah ay haystaan.
Hay’ad caalami ah oo lagu magacaabo The Intercept ayaa hay’ada sirdoonka maraykanka ee lagu magacaabo The US National Agency (NSA) ku eedaysay in ay sirdoonka taliska wayaanaha u gardaduubeen shacabka lagumaysto ee ree Itoobiya iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda taliska wayaanaha.
Hay’ada ayaa sidoo kale dowlada Maraykanka ku eedaysay in ay garab siinayso dowlada Itoobiya oo aan ilaalinin xuquuqda aadamaha waxayna hay’adu sheegtay in maraykanku uu kabeen sheegay ilaalinta xuquuqda aadamaha ee uusheegto.
Hay’ada The Intercept ayaa sheegtay in hay’ada sirdoonka Itoobiya ee arintan lootababaray ay kashaqeeyaan 103 qof oo Itoobiyaan ah iyo 8 Ameican ah, waxaana lasheegay in ay saldhigyo kuleeyihiin magaalooyinka Diridhabo iyo Gonder, waxaana lagu magacaabaa The Laion Pride Project. Waxaana lasheegay in ay ilaa iyo hada baadheen 7700 oo File iyo 900 oo Report.
Warbixinta ay hay’ada The Intercept soosaartay ayaa dowlada Maraykanka indhaha caalamka kusoo jeedisay waxaana lasheegayaa in mashruucan dowlada Maraykanka uu kuyahay ceeb wayn.